Version 0.5.4 – Quick fanamboarana
Jona 14, 2010 amin'ny tolotra 2 Comments
Andro vitsy lasa izay no mangina afaka 0.5.4 izay raikitra vitsivitsy hita ao amin'ny bibikely 0.5.3, indrindra ny Ajax ary ny sasany amin'ny tranga amoron'ny Url fandikan-teny. Raha ny teo aloha OK dikan-miasa ho anao, misy tena tsy ilaina ny hanatsarana.
Na izany aza – handray ny naoty, bibikely misokatra eo amin'ny Trac (trac.transposh.org) dia ireo fa isika dia afaka hamaha haingana.
Ankafizo io dikan-ary aoka isika fantany izay hevitrao.
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: bugfix, tsy ampy taona, fanafahana
Jolay 24, 2010 amin'ny 8:27 aho
Manana olana, hampavitrika Plugin Transposh, ny fahadisoako dia :
Ny fanitarana dia mampandeha, satria Niteraka mahafaty fahadisoana.
Parse fahadisoana: Misy diso ny raikipohy, tsy nampoizina T_STRING, miandry T_OLD_FUNCTION na T_FUNCTION na T_VAR na '}’ in /homez.143/paulet/www/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/transposh.php ny tsipika 56.
Jolay 28, 2010 amin'ny 10:41 am
Tsy maintsy hanatsarana ny PHP5